आमिर खानका फ्लप फिल्म कुन-कुन ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
आमिर खानका फ्लप फिल्म कुन-कुन ? हेर्नुस्
काठमाडौं । बलिउडका सर्वाधिक सफल अभिनेतामध्ये एक आमिर खान ग्लोबल सेलेब्रिटी हुन् । भारतसहित चीन, पाकिस्तानलगायत विश्वका धेरै देशमा उनका फिल्मले अत्यधिक व्यापार गरेका छन् ।
विश्वभर आमिरका फ्यान धेरै छन् । त्यसैले यसपटक उनी अभिनीत ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ले बलिउडमा नयाँ रेकर्ड राख्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यो फिल्म रेकर्ड राख्न त परै जाओस्, लगानी उठाउनै संघर्षरत छ ।
आमिरले आफ्नै प्रशंसकहरूबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ । ५३ वर्षीय यी अभिनेताले ९ वर्षको उमेरमै ‘यादोँ कि वारात’ फिल्ममार्फत बालकलाकारका रूपमा बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए ।
१९८४ मा प्रदर्शनमा आएको ‘होली’ फिल्म उनको मुख्य भूमिका रहेको पहिलो फिल्म हो । सन् १९८८ मा रिलिज भएको ‘कयामत से कयामत तक’ आमिरलाई बलिउडमा सफल अभिनेताका रूपमा स्थापित गर्ने सुरुवाती फिल्म बन्यो । त्यसपछि आमिरले धेरै सफल फिल्म खेलिसकेका छन् । तर, उनका फ्लप फिल्महरूको सूची पनि छोटो छैन ।
ठग्स अफ हिन्दुस्तान
यो आमिरको करिअरकै स्तब्धकारी फिल्ममध्ये एक हो । आमिर र अमिताभ बच्चनजस्ता दिग्गज कलाकारको अभिनयका बाबजुद फिल्मले अत्यधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ ।
बलिउडमा करोड क्लबको सुरुवात गर्ने श्रेय पाएका आमिरले ‘गजनी’, ‘थ्री इडियट्स’, ‘धुम थ्री’, ‘पिके’, ‘दंगल’लगायत ब्याक टु ब्याक सफल फिल्म दिइरहेका थिए ।
दंगलले बलिउडमा २ हजार करोडको आँकडा पार गर्दै यसअघिका सबै कीर्तिमान तोड्यो । पर्याप्त प्रचारविनै रिलिज भएको सेक्रेट सुपरस्टार पनि सुपरहिट भयो ।
तर, बहुप्रतीक्षित ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ले लगानी उठाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ३ सय करोड भारतीय रुपैयाँमा तयार भएको यस फिल्मले न समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पायो, न आमदर्शककै मन जित्यो ।
मंगल पाण्डे– द राइजिङ
सन् २००५ मा रिलिज भएको यो बायोपिक फिल्म व्यापारिक रूपमा असफल फिल्मको सूचीमा पर्छ । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका भारतीय सैनिक मंगल पाण्डेले स्वतन्त्रताका लागि गरेको विद्रोहको कथा यस फिल्ममा समावेश छ ।
सन् १८५७ मा ब्रिटिसविरुद्ध भारतीयले गरेको विद्रोहका विषयमा बनेको फिल्ममा मंगल पाण्डेको भूमिका आमिरले नै निभाएका छन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बनेको यस फिल्मले समीक्षकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पायो, तर विवादमुक्त हुन सकेन ।
७ जनवरी २००० मा यो फिल्म रिलिज भएको थियो । तर, सहस्राब्दीको सुरुवात आमिरका लागि दुःखद रह्यो । सन् १९९६ को ब्लकबस्टर फिल्म ‘राजा हिन्दुस्तानी’पछि निर्देशक धर्मेश दर्शन र आमिरले यस फिल्ममा एकसाथ काम गरेका थिए ।
त्यसैले दर्शकले व्यघ्रताका साथ रिलिज डेट कुरेका थिए । तर, ‘मेला’ असफल भयो । एक्सन, रोमान्स र ह्युमर मिश्रित यस फिल्ममा ट्विंकल खन्नाको पनि अभिनय थियो ।
सन् १९९५ मा रिलिज हुनपूर्व यो फिल्मको चर्चा पनि ठूलै थियो । यस फिल्मलाई मन्सुर खानले निर्देशन गरेका थिए । फिल्ममा स्टार अभिनेत्री मनीषा कोइराला पनि थिइन् र अनु मलिकले मीठो संगीत भरेका थिए । तर, फिल्म फ्लप भयो ।
मन्सुरकै डेब्यु निर्देशनमा बनेको ‘कयामत से कयामत तक’पछि आमिरले बलिउडमा स्टार छवि निर्माण गरेका थिए । ‘जो जिता वो सिकन्दर’ मन्सुरको निर्देशन र आमिरको अभिनय रहेको अर्को चर्चित फिल्म हो ।
१९९५ मा आशुतोष गोरिकरको निर्देशनमा बनेको यो एक्सन फिल्ममा आमिर मुख्य भूमिकामा थिए । तर, फिल्म असफल भयो । यस फिल्मको प्रचार पनि निकै कम गरिएको थियो । यद्यपि, केही समयपछि आशुतोषकै निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘लगान’ निकै सफल भयो ।
अन्दाज अपना अपना
१९९४ मा रिलिज भएको यो फिल्ममा आमिर खानसँगै सलमान खान, रविना टन्डन, करिस्मा कपुर, परेश रावल र शक्ति कपुरको अभिनय थियो । गोविन्दा अतिथि भूमिकामा देखिएका थिए ।
फिल्मले हलमा राम्रो व्यापार गर्न सकेन र कुनै अवार्ड पनि जितेन । त्यसैले आमिरका फ्लप फिल्महरूको सूचीमा यो पनि पर्छ । तर, यसका बाबजुद यो फिल्मलाई टेलिभिजनमा हेरेपछि धेरै दर्शकले मनपराए । अहिले पनि यस फिल्मले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेको छ ।
दीपक मेहताको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म बक्स अफिसकेन्द्रित थिएन । यो फिल्म सेमी–आर्टहाउस फिल्म अर्थात् निश्चित दर्शकलाई लक्षित गरेर बनाइएको हो ।
आमिर खानले ब्याक टु ब्याक राजा हिन्दुस्तानी, इस्क र गुलामजस्ता सफल फिल्म दिएपछि १९९८ मा यो रिलिज भएको थियो । तर पनि यस फिल्मलाई लिएर दर्शकले कुनै रुचि नै देखाएनन् । फिल्म राम्रो बने पनि व्यापार राम्रो भएन ।
हलिउड फिल्म ‘द गडफादर’बाट अत्यधिक प्रभावित यो फिल्म १९९५ मा रिलिज भएको थियो । फिल्ममा आमिरसँगै दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनिकान्तले समेत अभिनय गरेका छन् । तर, फिल्म असफल भयो । आमिरका बिर्सनलायक फिल्मको सूचीमा यो पनि एक हो ।
१९९३ मा रिलिज भएको यो फिल्ममा आमिरसँगै सुनील दत्त, विनोद खन्ना, रविना टन्डन, सैफ अली खानलगायत स्टार कलाकारको अभिनय छ । यश चोपडाको निर्देशनमा बनेको यस फिल्मलाई उनकै छोरा आदित्य चोपडाले लेखका हुन् । तर, यो रोमान्टिक फिल्म असफल भयो ।
यसबाहेक ‘जवानी जिन्दावाद’, ‘लभ लभ लभ’ ‘दिवाना मुझसा नही’, ‘इसी का नाम जिन्दगी’,‘दौलत की जंग’ पनि आमिरका असफल फिल्मको सूचीमा पर्छन् । नयाँ पत्रिकाबाट साभार
ट्याग्स: aamir khan flop film, Amirkhan